Heshiiskii 2aad ee Gaalkacyo Ma Hirgeli Doonaa? • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Heshiiskii 2aad ee Gaalkacyo Ma Hirgeli Doonaa?
Heshiiskii 2aad ee Gaalkacyo Ma Hirgeli Doonaa?
Posted: Omar Akhyaar - November 16, 2016
Kadib dagaal socday muddo ka badan hal bil ayey xabbad-joojin iyo wadahadal ku dhawaaqeen markale hoggaamiyayaasha maamulada Puntland, Galmudug iyo Raysalwasaaraha Dowlada Federaalka Soomaaliya oo ay wehliyaan xubno ka socda beesha Caalamka.
Heshiiskan ayaa ka koobnaa shan qodob oo ah:
In la joojiyo dhamaan wixii abuuraya colaada taas oo la’isu mariyo hawadda (Warbaahinta).
Waxaa muuqata in heshiiskan uusan wax badan ka duwaneyn kii ay labada maamul wadagaareen muddo hada laga joogo hal sano, bishii Disember 2015. Heshiiskaasi ayaa sidan oo kale qorayey in labada dhinac kulan kale isugu yimaadaan isla markaana wada dhisaan guddi ka shaqeeya nabada iyo xabad-joojinta labada dhinac ku heshiisay.
Taariikhda dagaalada, xiisadaha iyo colaada ka taagan gobalka Mudug, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo waa mid muddo soo jirtay, balse dagaalada hada taagan ayaa ah kuwo sii xoogeystay tan iyo intii la dhisay maamulka Galmudug oo isagu horey u sheegtay inuu ka taliyo guud ahaan gobalada Mudug iyo Galgaduud, inkastoo maalmuukaasi dhab ahaantii uu ku kooban yahay magaalada Cadaado ee gobalka Galgaduud.
Hadaba marka laga hadlayo xalinta khilaafaadka waxaa lama huraan ah in labo qodob la qiro ama ay meel isla dhigaan dhinacyada is-haya. Arrintaasi oo aan illaa iyo hada lagu guuleysan.
Qodobka 1aad; ayaa ah in labada dhinac isla Qeexaan waxa ay isku heystaan!
Qodobka 2aad; ayaa ah in ay jirto cid labada garab oo ka madax banaan oo u gar qaadi karta ama awood u adeegsan cidda jebisa heshiisyada la gaaro si toos ah ama mid dadban.
Hadaan eego labadii dagaal ee Gaalkacyo kii dhacay dhamaadkii 2015 iyo 2016, waxay labaduba ka bilowdeen laba mashruuc oo dhismo ah oo ay Puntland ka hirgelineysay dhulka ay ka taliso ee Galbeedka magaalada Gaalkacyo gaar ahaan xaafada Garsoor.
Dagaalkii 2015; ayaa ka bilowday Wado laami ah oo laga dhisayey Xaafada Garsoor Mashruucaasi oo qeyb ka ahaa mashaariicda horumarinta wadooyinka ee Puntland ka fulisay degmooyinka kala duwan ee gobalada Puntland. Galmudug xiligaasi waxay ku dooday in wadadaasi aan la dhisi karin maadaama ay kusoo dhawaaneyso qeybaha koonfureed ee magaalada Gaalkacyo oo ay ku nool yihiin dadka taageersan maamulka Galmudug.
Dagaalkii 2016: ayaa ka dhashay Maxjarka Xoolaha oo ay Puntland ka dhisaysay duleedka Galbeedka Gaalkacyo oo ku beegan isla xaafada Garsoor. Galmudug ayaa ku dooday in dhulka laga dhisayo maxjarka qeyb kamid ah sheeganayaan dadka ku abtirsada maamulka Galmudug.
Marka laga yimaado Mashaariicdan ay Puntland Gaalkacyo ka waday oo ay Galmudug kasoo horjeedo ayaa waxaa sidoo kale jiray dhacdooyin garab socday oo saameyn weyn ku lahaa go’aanada ay labada maamul gaareen gaar ahaan dhinaca Puntland.
Dowlada Puntland ayaa muddooyinkii danbe dadaal ugu jirtay inay xoojiso amniga magaalada Gaalkacyo oo ay ka dhaceen dilal badan oo loo aaneenayo inay geysteen shaqsiyaad ama kooxo hubeysan oo kasoo tilaabay dhinac Galmudug. Falalka ayaa la oron karaan waxay sii kala fogeysay kalsoonidii labada dhinac isku qabeen ee dhanka amniga.
Sidoo kale Qaraxii weynaa ee bishii Agoosto ee sanadkan ka dhacay magaalada Gaalkacyo Suuqa weyn ee cusub oo ay Al Shabaab sheegatay inay fulisay ayaa gaadiidkii lagu fuliyey ay kasoo galeen dhinaca Galmudug, taasi oo keentay in Puntland go’aan ku gaarto in la joojiyo gaadiidkii ka imaan jiray Koonfurta Soomaaliya ee usoo gudbi jiray gobalada Puntland.
Dhismaha Maxjarka ayaa qeyb ka ahaa mashruucaasi amniga lagu sugayo oo ay Puntland ku dooneysay in xoolaha marka laga dajiyo gaadiidka ka keena koonfurta Soomaaliya inta baaritaanka lagu wado ay xoolahaasi ku nastaan maxjarkan laga dhisayey duleedka xaafada Garsoor ee Galbeedka Gaalkacyo.
Arrintan ayaa sii xumaatay kadib markii Maamulka Galmudug ka horyimid hawlaha amniga lagu sugayo oo ay Puntland waday, waxaana la xasuustaa sidii ay Galmudug uga hortimid ciidamada Danab ee dowlada Federaalka ee la keenay Gaalkacyo si ay hawlgalo uga fuliyaan koonfurta Gaalkacyo ama xaafada Wadajir (Baraxley) oo lagu soo qabtay xubno kamid ah Al Shabaab oo uu ku jiro macalinkii Bambaanooyinka sameyn jiray oo u dhashay dalka Sudan.
Kadib hawlgaladaasi ayey maleeshiyaadka ku sugan Koonfurta oo qaarkood aanba ka amar qaadan maamulka Galmudug iyo qeybo kamid ah ciidamada u qoran Galmudug ay bilaabeen dhaq dhaqaaq ay ka wadeen bariga iyo Galbeedka Gaalkacyo, waxaana jiray dagaalo miyiga ku dhexmaray beelaha gobalka Mudug wada dega.
Waxaa xigtay duqeyntii Maraykanka la beegsaday Maleeshiyaad iyo ciidamo Galmudug ay sheegatay oo ku sugnaa bariga magaalada Gaalkacyo duleedka Airporka Abdullahi Yusuf, kuwaasi oo lagu eedyey inay rasaas marar dhawr ah ku rideen dhinaca Madaarka Gaalkacyo oo ay gacanta ku heyso Puntland, ku sugan yihiin ciidamo ka socda Maraykanka ee la dagaalama Al Shabaab.
Haddaba dhamaan dhacdooyinka sii cakiray xal u helida arrimaha Gaalkacyo ayaa muujinaya sawir cad oo ah in Galmudug ay si weyn u qoonsatay mashaariicda horumarineed oo ay Puntland ka wado dhulka ay ka taliso ee Gaalkacyo, taasi oo sii fogeysay rajadii maamulka Galmudug ka qabay in mustaqbalka ay noqdaan maamul matala guud ahaa gobalada Mudug iyo Galgaduud.
Puntland oo ka talisa dhamaan xarumihii hore ee dowlada sida Madaarka iyo kontaroolada magaalada oo ay u dheertahay xarumo cusub oo ay Puntland ku kordhisay saldhigyada ay Gaalkacyo ku leeyihiin hay’ada dowladooda.
Galmudug sida muuqata waxay qaadatay go’aan ah inay ka hortimaado dhamaan mashaariicda Puntland ay ka wado Gaalkacyo, waxayna markii hore ku diiday cod dheer oo ay warbaahinta marisay, markii danbena u bareertay inay duulaan ciidan ku qaado xarumaha Puntland, falkan oo ah midka sababay dagaaladii ka dhacay magaalada Gaalkacyo.
Dad badan oo ku nool magaalada Gaalkacyo ayaa aaminsan in Galmudug qorshaheedu yahay in dagaalka ay ku hesho dhamaan waxa aysan hada heysan oo ah; in qeyb laga siiyo maamulka magaalada iyo xarumaha ay Puntland hada gacanta ku heyso.
“….Dhul la dhisayey in ka badan 20 sano ayaa maamul cusub oo hada la dhisay uu doonayaa inuu wax ku yeesho, isagoo aan waxna ku darsan oo aan ka ahayn inuu xasilooni daro usoo jiido…”ayuu yiri mid kamid ah Odayaasha Gaalkacyo ee dhinaca Puntland.
Macada sida la isugu soo dhaweyn karo labada dhinac oo si weyn usii kala fogaaday dagaaladii ugu danbeeyey, waxaana la ogeyn xalka laga waayey Gaalkacyo in uu ka imaan doono magaalada Kismaayo oo ay labada maamul u balameen in shirkooda danbe ku qabsadaan.
Haddii Gaalkacyo xal loo rabo xalkeeda Kismaayo lagama raadiyeen, reer Gaalkacyo waa dad is-yaqaan, waxna wadaaga waxna u dhexeeyaan, nabad ayaa dan u ah cid kasta, waxaase la is-weydiin Maroodiga caanaha laga maali doono cidda dhami (cabi) doonta.